Fikaroham-bahaolana : mandrangaranga fitondrana miaramila ny Foloalindahy | NewsMada
Fikaroham-bahaolana : mandrangaranga fitondrana miaramila ny Foloalindahy
Nampitandrina. Nanao fanambarana indray ny eo anivon’ny fianakaviamben’ny mpitandro filaminana, omaly tetsy Ampahibe. Nivoitra tamin’izany ny tokony hitadiavan’ny mpanao politika vahaolana, miainga amin’ny fanapahana noraisin’ny HCC farany teo. Nilaza ny handray fepetra izy ireo raha tsy misy ny fifanarahana.
“Hijoro ny fianakaviamben’ny Foloalindahy amin’ny maha aroriaka farany azy ireo ho fanajana sy fampiharana ny andin-dalàna voalazan’ny lalàmpanorenana ka tsy hamela ny firenena ho latsaka an-katerana sy amin’ny fanaovana takalon’aina na ankivy ny tanindrazana” , hoy ny fanambarana novakin’ny minisitry ny Fiarovana, Rasolofonirina Beni Xavier. Notsiahivin’izy ireo fa samy saropiaro amin’ity tanindrazana ity ny olom-pirenena tsirairay noho ny fitiavan-tanindrazana. Eo koa ny tokony hanajana ny lalàmpanorenana sy ny tany tan-dalàna araka ny nambaran’izy ireo. Anisan’izany ny fanapahana noraisin’ny HCC ny 25 mey teo. Manampy izany ny ambaran’izy ireo fa fanambarana roa sosona efa nataon’ny fianakaviamben’ny mpitandro filaminana. “Hampirisihina ny rehetra hanaraka ny didin’ny HCC ka hampandefitra ny hambompo sy hanandratra avo ny fitiavan-tanindrazana ary ny fikatsahana ny tombontsoam-pirenena. Tohizo ny fametrahana ny fifanarahana politika efa natomboka, araka ny voalazan’ny didim-pitsarana”, hoy ihany izy ireo. Mbola nampitandrina koa anefa ny mpitandro filaminana fa ho loza mitatao ho antsika ny fifandroritana politika amin’ny famakiana ny andininy voalazan’ny didin’ny HCC ka hahitan’ny fahavalom-pirenena tombontsoa. “Noho izany, mampirisika ny tompon’antoka amin’izao savorovoro mitady hampikatso ny fiainam-pirenena izao izahay, hahatongavanareo amin’ny fitadiavana vahaolana mahomby manaraka ny soatoavina sy ny kolontsaina malagasy mifanandrify amin’ny voalazan’ny savaranonandon’ny lalàmpanorenana…”, hoy izy ireo.
Tapitra anio ny fito andro hanendrena praiminisitra…
Araka izany, ho tonga hatraiza izao fanambaran’ny fianakaviamben’ny mpitandro filaminana izao ? Miantso azy ireo hiaro ny ara-dalàna, miainga amin’ny didin’ny HCC ny tokony hanendrena praiminisitra, hatramin’ny anio, ny depiote ho an’ny fanovana manana ny maro anisa, etsy amin’ny kianjan’ny 13 mey. Hanao ahoana ny ho fandraisan’ny Foloalindahy izany satria voasoratra amin’ny fanapahan’ny etsy Ambohidahy koa ny fe-potoana fito andro, tapitra anio ? Nahoana ny be galona no mitaky ny fitondrana miaramila izy ireo raha tokony anjaran’ny filoha avy hatrany ny mampihatra izany ? Homanina ny sain’ny olona mba hanomezan’ny tafika ny fahefana indray ny filoha ? Ahiana indray koa ny hiverenan’ny 17 marsa 2009, tahaka ny tetsy Antanimena ?